Bọchị Ndị Nne Obi !tọ! | Martech Zone
Bọchị Ndị Nne Obi !tọ!
Sunday, May 13, 2018 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
Motherbọchị ndị nne bụ ụbọchị ezumike ezumike nke atọ kachasị nke afọ na ihe karịrị ijeri $ 3 ejiri naanị na United States. 22.3% nke ndị America na-azụta ọla maka ụbọchị nne, ịrị elu 35.5% kwa afọ karịa afọ. N'ezie, a na-atụ anya mmefu onyinye ụbọchị overallbọchị Nne ga-abawanye 6.8% afọ karịa afọ.
Na-echekarị ihe kpatara Motherbọchị Nne ji bụrụ ihe a ma ama karịa ụbọchị Nna? You maara na ụbọchị nne bụ ezumike mba karịa ọkara narị afọ gara aga? You ga-ekwere ya ma ọ bụrụ na anyị agwa gị na ndị nne adịrị ndị mụrụ ụmụ karịa ndị nna? Edere ihe akaebe ahụ na DNA anyị. Wardgwọ
Nke a bụ ihe Ama infographic na-arụtụ aka ụfọdụ nke akụkọ ihe mere eme nke Motherbọchị Ndị Nne na mgbanwe nke n'ji emefu ihe a dị mkpa ezumike. A sị ka e kwuwe, ọ dịghị onye n’ime anyị ga-anọ ebe a ma ọ bụrụ na e nweghị ihe dị ka nne! Bọchị Ndị Nne Obi !tọ!
Tags: ememeinfographicubochi nne
Ọganihu mmadụ na Dell Technology World